दिलिप कुमार गौतम शुक्रबार, जेठ १३, २०७९, १८:१३:००
काठमाडौँ-४१ बर्ष पछि काठमाडौँ बाट मेयर पदमा स्वतन्त्र उमेदवारको रूपमा उठेर बालेन्द्र शाहा निर्वाचित भएका छन । यो पदमा २०४६ सालपछि कांग्रेस र एमाले को हाली-मुहाली थियो तर यस पटक सो हाली-मुहाली कम्तिमा पनि यो पटकको लागि तोडिएको छ र काठमाडौँमा खुशी देखिन्छ।
किन र कसरि यो सम्बभ भयो त ? मेरो आफ्नो व्यक्तिगत सोच र अनुभव तपाईहरू को सामू राख्दै छु। म आफैपनि कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य भएको नाताले मैले बुझेको कांग्रेसमा युवा बालेनहरू धेरै नै छन तर कांग्रेसमा युवाहरू अगाडि बढ्न र अवसर प्राप्त गर्न धेरै पापड बेल्नुपर्छ ।
बुढा भैसकेका नेताहरूले र पावरमा बसेका नेताहरूले नया सोच नयाँ द्दष्टिकोण र क्षमता भएका बालेन हरूलाई अगाडि बढ्न दिदै दिदैनन । कोहि अपबाद कांग्रेसी यूवा बाहेक धेरै यूवा कांग्रेसीरू कि त विदेश पलाएन भएका छन कित फ्रर्स्टेड भएर राजनीति बाट अलग भएर बसेका छन । अहिले भएका क्षमता भएका यूवाहरू पनि अवसर नपाएर बसेका छन र ति पनि कहिले छाडेर जाने हनु यसै भन्न सकिदैन । यहाँ अवसर को लागि क्षमता भन्दा पनि चाप्लुसी, चाकडि र पैसामा अवसरहरू साट्ने गरिन्छ ।
काठमाडौँका पूरानो नेता तिर्थराम डंगोल ज्यूले एउटा भेटमा मलाई एउटा प्रसंग सूनाउनु भएको थियो, काठमाडौँको एउटा ठुलो पुरानो नेताले ट्याक्सि चड्दा चालकसंग कुराकानीको क्रममा पैसा कमाउन सवै भन्दा सजिलो पेशा भनेको राजनिति हो भनेर सिकाउनुभएछ। अहिले राजनीतिलाई नेताहरूले कमाउने भाडा बनाएका छन त्यसैले पनि कांग्रेसी बालेनहरूले क्षमताको आधारमा अवसर पाउने छैनन् ।
अहिले कांग्रेसमा अवसर पाउन कि त नेताको श्रीमती कि त छोरा, छोरी हुनुपर्छ कि त पैसामा अवसर किन्न सक्नुपर्छ। यसको ज्वलन्त उदारण काठमाडौँमा मेयर को उमेदवार नै हुनुहून्छ। कांग्रेसले क्षमतावान यूवाहरूलाई अवसर दिन नयाँ प्रणाली बनाउनु पर्छ र अवसर प्रदान गर्नुपर्छ तर मलाई लाग्छ अक्झै २० बर्ष कांग्रेसको आँखा खुल्ने छैन र अझै पनि युवाहरूलाई अवसर नदिने हो भने स्वतन्त्ररूपमा धेरै बालेनहरू जन्मने छन जन्मनु पनि पर्छ । धन्यबाद जय नेपाल !
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ १३, २०७९, १८:१३:००